Dhimmi hidhamtoota Oromoo fi lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa kun hanga ibsamaa jiruu ol jabaa dha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhimmi hidhamtoota Oromoo fi lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa kun hanga ibsamaa jiruu ol jabaa dha.
Har’a (Onkoloolessa 19,2020) Jaalli kiyya tokko gara mana hidhaa Sabbataa-Daalattii jedhamuun beekamu hidhamtoota Siyaasaa Oromoo gaafachuu deemee ture. Hogganootaa fi Qondaalota ABO akkasumas Miseensota achitti argaman dubbisee ture. Haamilee fi Miirri isaanii hedduu kan nama jabeessuufi dhaamsa jabaadha bilisummaa keessaniif hojjedhaa ka jedhu ture.
Garuu Jaal Mikaa’el Booran ijji kan dhukkubuu fi Dawaa ykn qoricha kan hin argannee ta’u naa hime. Keessattuu ijji Goota kana yeroo kitaaba dubbisu otoo wal irraa hin citiin imimmaan akka dhangalaasu natti hime.
Maddi: Gadaa Gabbisaa
Dhimmi hidhamtoota Oromoo fi lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa kun hanga ibsamaa jiruu ol jabaa dha. Namni biyya sanarraa haala kana miidiyaaf ibsa kennuu danda’u jiraa laata? Sagalee hidhamtoota kanaa ol qabanii addunyaatti lallabuuf akka mijaahutti, warri biyya sana jirtan kan haala hidhamtoota kanaa (dhiira qofa osoo hin taane keessattuu haala dhalaaleen keessa jiran) dhiheenyatti beektanii fi miidiyaatti baatanii dubbachuuf rakkoo hin qabne mee nu qunnamaa.
የኢሳት ጉዳይ:-ኢሳት ከአየር ላይ የወረደው በገንዘብ እጥረት አይደለም::